LG G2 ကိုတရားမဝင်သော Android 12 (D5.0.1 model) ၏နောက်ဆုံးပေါ် CM802 သို့မွမ်းမံနည်း Androidsis
LG G2 ကိုနောက်ဆုံးပေါ် CM12 တရားမဝင် Android 5.0.1 (D802 model) သို့မွမ်းမံနည်း။
Francisco Ruiz | | LG, လဲ tutorial
လာမယ့်ပို့စ်တွင်ငါလက်ဖြင့် update လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါမယ် LG G2 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ်, မော်ဒယ် D802, Cyanogenmod ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းရန် တရားမဝင် CM12တစ်ဗားရှင်း Cyanogenmod သည် Android 5.0.1 တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည် အမှန်တရားက၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် terminal တွင်ရက်အနည်းငယ်အကြာစမ်းသပ်ပြီးသည့်နောက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ LG G2 တွင် Android Lollipop နှင့် ပတ်သက်၍ install လုပ်ထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုငါပြောနိုင်သည်။
အသစ် update ကိုမှာတော့နေဆဲထည့်သွင်းစဉ်းစား တရားမဝင် Cyanogenmod 12, Androidsis တွင်ထုတ်ဝေသောမကြာသေးမီကဖော်ပြခဲ့သောရဲဘော်ရဲဘက်မှတ်ချက်ချသောတိုးတက်မှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးနိုင်သည်။ တိုးတက်မှုများ အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောဂီတဖွင့်စက် အဖြစ်ပါဝင်သည် ပြခန်းအက်ပလီကေးရှင်း Android Lollipop မှာ Google က G + Photos application ကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် LG G2 တွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအတည်ပြုနိုင်သောတိုးတက်မှုများထဲမှတစ်ခု ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နောက်ဆုံးတရားဝင်မဟုတ်သောဗားရှင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဘက်ထရီကုသမှုအတွက်တိုးတက်မှု, ယခုနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်နက်ရှိုင်းစွာအိပ်စက်ခြင်း mode ထဲ ၀ င်ပါက terminal သည် ယခုအချိန်မှစ၍ ယခင်ဗားရှင်းများတွင်လုပ်သင့်သည့်အတိုင်းအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။
1 ဤတရားမဝင် CM2 ကို အသုံးပြု၍ LG G5.0.1 ကို Android 12 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
2 လိုအပ်သောဖိုင်များနှင့် ROM တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
ဤတရားမဝင် CM2 ကို အသုံးပြု၍ LG G5.0.1 ကို Android 12 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
ဒီကို install နိုင်မှလိုအပ်ချက်များကို တရားမဝင် Rom CM12 ငါတို့အတွက် LG က G2 သူတို့ကအောက်ပါဖြစ်လာသည်
LG G2 D802 ကို root လုပ်ပါတယ် နှင့်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုအတူ။
Recovery က၎င်း၏နောက်ဆုံး version ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ.
ဘက်ထရီက 100 x 100 ကိုအားသွင်း။
USB debugging သည်ဆက်တင်မှဖွင့်ထားသည်။
Nandroid backup CM12 ကိုမတပ်ဆင်မီကစနစ်ကိုပြန်လည်ရယူရန်။
ဖိုင်တွဲအရန်ကူးရန် EFS နဲ လိုလိုမယ်မယ်။
လိုအပ်သောဖိုင်များနှင့် ROM တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း
လိုအပ်သောဖိုင်များကို ZIP ပုံစံဖြင့်ချုံ့ထားသောဖိုင်နှစ်မျိုးဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသည်၊ တစ်ခုမှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည် Rom Cyanogenmod CM12 ၎င်း၏မူရင်း application များနှင့်အတူဒီဇင်ဘာလ 15 ၏၎င်း၏ဗားရှင်းနှင့်အခြား၌တည်၏ Google၊ Gappsသို့ Android Lollipop:
တရားမဝင် CM12 ကို 20141215 ကို download လုပ်ပါ.
Gapps Android Lollipop ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
အရာများအတွက်ဤဖိုင်နှစ်ခုအပြင် မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှုသင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါနှစ်ခုယခင်ဇစ် flashed ခဲ့တခါ AOSP D802 modem ကို download လုပ်ရမည် အရာသည်နောက်တဖန်မျက်နှာပြင်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
zip ဖိုင်များအားလုံးကို download ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုကူးယူရပါမည်။ decompress မပါဘဲတိုက်ရိုက် LG G2 ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။ ပြီးရင် Recovery Mode ကို restart လုပ်ပါ TWRP နှင့်ဤမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာ:
ကျနော်တို့ option ကိုရိုက်ထည့်ပါ သုတ် ငါတို့ရှိသမျှသည် Wipes ရွေးချယ်ပါ LG G2 ၏ internal memory မှလွဲ၍ ကျန်ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာ Internal Storage မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်။
ကျနော်တို့ action ကို execute မှဘားရွှေ့။
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ Install ပထမ ဦး ဆုံး Rom ၏ zip၊ Gapps Lollipop ၏ Zip ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပါ။
ကျနော်တို့ option ကိုသွားပါ reboot ပြီးတော့ငါတို့ရွေးလိုက်တယ် ယခု reboot system ကို.
Terminal ကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာငါတို့ပျော်နေမှာပါ Android 5.0.1 Lollipop သည် CM12 Unofficial ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်တွင်မျက်နှာပြင်လည်ခြင်းပြrotနာများရှိပါက Recovery မှအထက်ပါ modem သို့မဟုတ် baseband ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ AOSP KKD802 Que သင်ဤ link ကိုအတူတူရနိုင်သည်. မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် modem Wipe ကိုမလိုအပ်ပါဘူး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2 ကိုနောက်ဆုံးပေါ် CM12 တရားမဝင် Android 5.0.1 (D802 model) သို့မွမ်းမံနည်း။
ကုလား ၀၂ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Liquidsmooth rom ရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ဤအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာပါကအရာအားလုံးမှန်ကန်လိမ့်မည်လော။
မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းကိုထည့်သွင်းသည့်အချိန်တွင် rom သည် flashing ဖြစ်နေပြီးမတိုးတက်ပါ။ ၎င်းတွင် ၁၀ မိနစ်ကျော်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ lollipop တွင်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း evomagix rom နှင့်အတူ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Francisco, cm12, evanomagix သို့မဟုတ် liquidsmooth အကြားပိုကောင်းပြီးပိုမိုတည်ငြိမ်သည်
android3LP နှင့်အတူမိုးတိမ်တိုက် g5.0 ထွက်လာမလားသိလား
ငါ CM12 နှင့်အတူနေပြီး Cloudy ၏မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ LG မှကတိပေးထားသည့်တရားဝင် Lollipop update ရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် Cloudy သည်သူ၏ Roms ကို Android 5.0 ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သော Stock နှင့် G3 ၏ ports များသို့ update လုပ်ပေးလိမ့်မည်။
ငါ cm12 install လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်တစ်ချိန်လုံး flash လုပ်နေသည်။ သို့သော်ထိုနေရာမှမဖြစ်ပေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင်နောက်ဆုံး twrp ရှိရမည်
ငါ့ကိုအတူတူပါပဲ ... ဒါပေမယ့်ငါမိုးအုံ့ g3 မှလာ၏
ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ၊ ငါ့ကိုဆက်ပြီးလွင့်နေသည် ... အခုဘာလုပ်ရမလဲ။ ကူညီကြပါ
Recovery ကိုပြန်သွားပါ။ သင့်တွင်ရှိလျှင် backup ကို flash လုပ်ပါ။ ၎င်းတွင်မရှိလျှင် lg flash tool ဖြင့်သိုထားနိုင်သည်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ခန်းစာအချို့ရှိပါသည်။ ၎င်းသည်မခက်ခဲပါ။ သင် pc ပေါ်တွင် flash tool ကို install လုပ်ပါ။ driver များ၊ kdz တစ်ခုကို download လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးစဉ်းစားခဲ့သော H နှင့်အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
သင့်တွင် usb / otg ဆိုလျှင် usb ... cm11 ရှိမည်သည့်အခန်းကိုမဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပါကပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုသင်ရိုက်ထည့်ပြီး၊ usb / otg မှတဆင့် flash များအနည်းဆုံး kdz နှင့် flash tool ကိုရှာဖွေရာတွင် ပိုမို၍ အားစိုက်သော၊ ဤမျှလောက်များစွာသောအချိန်တွင်ကုန်သွားလိမ့်မည်မဟုတ် ... gapps ကိုမမေ့ပါနှင့်
ငါ့ကို rom download လုပ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ !!
၎င်းကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေပြီး၎င်းသည်မပြီးဆုံးနိုင်ပါ။ ငါသုံးကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ ... ဘာမျှမ ... အရှက်ကွဲခြင်း
မင်္ဂလာပါ၊ ယောက်ျားများ၊ ဗုံဘယ်လိုသွားနေလဲ။ ဒီဟာကစတော့ရှယ်ယာနဲ့ပိုတူသလား။
Walter diaz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့် LGG12 မှာ cm2 ရှိတယ်။ ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒါကိုမကြိုက်ဘူး။ ကျနော့်အမြင်။ ကင်မရာကဆိုးတယ်၊ ဘက်ထရီကအရင်လိုလိုကြာရှည်မခံဘူး။ ဒါဆိုငါမိုးအုံ့ g3 ကိုပြန်သွားချင်တယ်။ cm12 ကနေမိုးတိမ် g3 ဆီကိုသင်ပြန်သွားနိုင်သလားသိလား။
walter diaz အားပြန်ကြားပါ
ငါ lg ၏တရားဝင် Lollipop ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီ Rom ကိုငါရေးချင်တယ်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလားသို့မဟုတ် twrp အသစ်ပြန်လည်ရရှိခြင်းဖြင့်သာလျှင်ကောင်းပါသလား။
Wave, လျှောက်လွှာကိုသင်၏အချိန်မှန်ကိုသီးသန့်ပုဂ္ဂလိကတွင်ဝေမျှရန် application
Android 5.0 Lollipop သည် LG G3 တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်